Reny vao tera-bao etsy Befelatanana Nahazo fanomezana manokana
Ny ankamaroan’ireo renim-pianakaviana tonga miteraka etsy amin’ny hopitalim-panjakana Befelatanana dia saika sahirana ara-pivelomana avokoa.
Misy amin’izy ireny no tsy manana akory na dia ny hamidy fanafody aza raha sanatria ka tojo olana. Misy ihany koa ireo tsy manana fitaovana hiterahana. Betsaka ireo efa noraisin’ity hopitaly iray ity an-tanana ny fikarakarana azy saingy misy ihany koa ireo karazana tranga tsy azo hihodivirana. Nahatsiaro manokana ireo renim-pianakaviana tonga miteraka ao amin’ity hopitalim-panjakana iray ity ny faran’ny herinandro teo ny Airtel notarihin’ny tale jeneraliny Maixent Bekangba. Tafiditra indrindra tao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny reny ny hetsika ka nanoloran’izy ireo kojakoja maro samihafa ho an’ireo mpiteraka. Anisan’ireny ny couche, ny ronono, ny savony…entina hanamaivanana ny fahasahiranan’ny renim-pianakaviana vao tera-bao amin’ny fiainana andavanandro. Fantatra tamin’izany fa misy hatramin’ny 14 taona ireo zazavavy kely indrindra tonga miteraka ao amin’ity hopitalim-panjakana iray ity raha mihoatra ny 55 taona kosa no zokiny indrindra. Misy amin’izy ireo no voatery mandalo fandidiana, tranga izay matetika misy isan’andro. Miisa folo isan’andro eo raha kely ireo renim-pianakaviana tonga miteraka ao amin’ity hopitalim-panjakana iray ity.